စတင်ပြုလုပ်ခြင်းMundo2017 အတွက်ကွယ်လွန်သည် "လေးများသည်သေနတ်ကိုင်တပ်သား" နှစ်ယောက်မှာ "အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့" သစ်ကိုကုန်သွယ်မှုစာချုပ်များ၏ဗိသုကာ။
ကနျ့အစိုးရတစ်ပိရမစ်ထိပ်ကနေစောင့်ကြည့်သောအစွမ်းထက်ကော်မရှင်ကသွေးဆောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များ "အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့" ကုန်သွယ်ရေးလွှမ်းမိုးသည် "Machiavellian" obscurantism အစီအစဉ်များ။
19 ဒီဇင်ဘာလ 2017 မမြင်နိုင်သော Mundo 5
La အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ကော်မရှင်တစ်ဦး၏ tentacles တစ်ခုမှာ "octopusy" ဘဏ္ဍာရေး အများဆုံးအရွယ်အစား, သူတို့ခိုင်မြဲစွာမလွှဲမရှောင်လွှမ်းမိုးသူတို့ကရယူအာဏာလွှမ်းမိုးမှုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခြင်းကနျြရစျသောသူတို့ကိုအအဖွဲ့အစည်းများလိုက်နာရန်, ကို "ကမ္ဘာ၏သခင်" အစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးအသက်ရှင်ကိုင်တွယ် "Enlightened" ဖြစ်စေတိတ်ဆိတ်တဲ့နှင့် torticero ဦးနှောက်ထဲမှာသတိမပြုမိသွားကြဖို့ကြိုးစားနေသူတွေကိုစေ့ညှစ်သတ်သည့်ဖုံးကွယ်သို့မဟုတ်ကြိုးစားမှု၏အောက်ဆုံး tracing ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့အမေရိကန်အပေါငျးတို့သစီးပွားရေးပါဝါကွယ်လွန်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ကြိုးကိုင်စနစ်တကျ 2003, နောက်ပိုင်းအတော်ကြာမိသားစုများကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါဝိဒ်သည် Rockefellerအဘယ်သူသည်အပေါငျးတို့သသဘာဝနှင့်အတူ operating ၏အချက်မှစီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်ခဲ့သူတို့သည်မိမိတို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လက်ရှိအစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သူဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောအခါ, ကတိသစ္စာပြုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုကြပါပြီ။
El NAFTA (မြောက်အမေရိကလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်), ပု GATT (ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အတွက်အုတ်မြစ်ချပေးသောအခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်အထွေထွေသဘောတူညီချက်,), ပု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် Cafta (အမေရိကန်, အမေရိကအလယ်ပိုင်းနှင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြားလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်), ပု ဘုရားသုံးဆူ (Trans-ပစိဖိတ်မဟာဗျူဟာသဘောတူညီချက်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်တစ်ဦးကဒေသခံနယ်မြေပါတီနှင့်ဝေးသြစတြေးလျတို့က, မလေးရှား, စင်္ကာပူ, ဘရူနိုင်း, ဗီယက်နမ်, ဂျပန်နှင့်နယူးဇီလန်တို့ကအမေရိကန်, ကနေဒါ, မက္ကဆီကို, ပီရူးနှင့်ချီလီပါဝင်သည်ဟု) ကို TTIP လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များမှာ၎င်း၏စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ) ၏ထို့ကြောင့်တည်ငြိမ်ရေးအပေါ်သူတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆက်လက်လိုသောလူအမျိုးမျိုးအကြားအမှောင်ညှိနှိုင်းမှုတကိုက်ညီသည့် (အရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမိတ်ဖက်) လောကမသေးပါကစစ်တုရင်တစ်ဦးအဆုံးမဲ့ဂိမ်းဖြစ်လျှင်အဖြစ်ကုသများကိုအသုံးပြုရသော, ပါဝါ၏အဓိကအာမခံကော်မရှင်ကသုံးနိုင်ကြပြီမဟုတ်သောအခြားဖြစ်ပွားနေသောအစီအစဉ်များကိုဖော်ပြထားခြင်း။
အတွက် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ကော်မရှင်ရည်ရွယ်ချက်များကိုရည်ညွှန်းသည်, မိမိသြဇာအရှိဆုံးအကြံပေးတဦး၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်အမှတ်ရစရာစကားများဖြစ်ရပါမည် Zbigniew Brzezinski မည်သည့်အေးစက်ခြင်းမရှိဘဲခန့်မှန်းပြီးသား 2017 အတွက် (မေ 1969 သေ) ။
"စနစ်တကျလူ့အသက်တာ၏အခြေခံယူနစ်အဖြစ်လူမြိုး-ပြည်နယ်, ကျောင်းအုပ်ကြီးဖန်တီးမှုအင်အားစုဖြစ်စဲထားပါတယ်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်များနှင့်နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းများက ပို. အဆင့်မြင့်သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆထက်ဖြစ်ကြောင်းအသုံးအနှုန်းများအတွက်အနာဂတ်သရုပ်ဆောင်နှင့်စီစဉ်နေပါတယ် -State "။
ဒါဝိဒ်သည် Rockefeller နှင့်သူ၏ငြင်းရူပါရုံကိုလူအပေါင်းတို့သည် "အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့" အဖွဲ့ဝင်ခြင်းဖြင့်လေးစား
အဆိုပါထပ်တလဲလဲကြေညာချက်ထောက်ခံကြောင်း Allusion ဒါဝိဒ်သည် Rockefeller () မတ်လ 2017 သေဆုံး သူနှင့်အခြားသူများနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတည်ဆောက်ပုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး၏ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းတို့က attuned နှင့် run ခံရဖို့အဘယ်သူမျှမခွဲခြာဆိုရှိပြီးသောအာဏာကိုတစ်ဦး "indestructible" ပိရမစ်, ပိုင်ဖျောအကြောင်းကိုရှိတယျလို့မခဲ့သည့်အခါ။
"တချို့ကတောင်မှကျနော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု cabal ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်; ငါ '' internationalists '' ငါ့မိသားစုနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်းဆိုပြီးစုစည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတည်ဆောက်ပုံသို့တစ်ဦးထက်ပိုဘက်ပေါင်းစုံကမ္ဘာကြီးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာတဝှမ်းအခြားသူများနှင့်လျှို့ဝှက်ကြံစည်ခဲ့ကိုစွပ်စွဲနေပါတယ်။ သောတာဝန်ခံင်လျှင်, ငါသည်အပြစ်ရှိတရားတွေ့တော်မူခြင်းနှင့်ငါကဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ "
ပါဝါ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများအဘယ်သူမျှမရိပ်ထဲတွင်လှရှိရာထိုသို့အကြောင်း, ဥပမာတစ်ခုပြသနိုင်ဖို့ကိုသတိရ, ဒီမှာဖြစ်ပါသည် မိုက်ကယ် Froman (1962 နှင့်ကြီးစွာသောဆက်ခံ postulate မှာမွေးဖွား) သည်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်စဲဘယ်တော့မှကြောင်း 2013 နိုင်ငံများနှင့်သဘောတူစာချုပ်များညှိနှိုင်းများအတွက်တစ်ခုတည်းသောကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် 11 အတွက်သမ္မတအိုဘားမားကခန့်အပ်ခဲ့သည်။ System ကိုအဘယ်သူသည်ကိုလည်းပုံမှန်အတိုင်းထောင်လွှားနှင့်အတူနိမ့်ဆုံးငြင်းပယ်ခံရဒီမိုကရက်တစ်နှင့်ရီပတ်ဘလစ်ကန်ရာထူးရယူမပြုခဲ့, သူ့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအတွက် said:
"အဘယ်သူမျှမဝေါဟာရကို "ဟောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး" ကအရူးလုပ်စေကြလော့။ အဆိုပါ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ သူတို့ကအစိုးရ၏အမှုဆောင်နျဌာနခှဲအတွက်ရာထူးယူတဲ့အခါမှာသူတို့ကနုတ်ထွက်။ အခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့မတော်တဆအဲဒီမှာမရဤကဲ့သို့သောအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အရေးပါသောအရာထူးအတွက်ဝတ်ပြုကြလော့။ တိကျတဲ့အစီအစဉ်, လေ့လာ shared ခံရဖို့သေချာအောက်ပါရှိပါတယ်။ "
သင်တိုအပေါငျးတို့သပန်းတိုင် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ကော်မရှင်လက်ရှိကားမောင်းသောစာချုပ်များ, ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါဘုရားသုံးဆူနှင့် TTIP အာဏာ tools များအဖြစ်အစိုးရများကအစားထိုးလိုကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏အကျိုးစီးပွားပိုမိုတိုးချဲ့ရန်ရန်၎င်း၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်အရေးကြီးများနှင့်ဦးစားပေးဒြပ်စင်ပါ။ "
အများဆုံးကမျက်နှာသာသောအကြီးစားကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုမှာ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ကော်မရှင်Monsanto, BASF, Bayer, Dow, DuPont, Syngenta, ပွင့်လင်းကတိသစ္စာပြုခြင်းနှင့်နားလည်သဘောပေါက်စေမည်အကြောင်း, 2008 ကတည်းကယနေ့ချိန်အထိဖော်ပြထားသောအထက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောနိုင်ငံများသို့အဆင်ပြေအောင်အရေးကြီးသောကော်မရှင်ရရှိရန်ဆက်လက်ရသောအရှိဆုံးနိုင်ငံစုံဒီကဗျာဆက်ကပ်အပ်နှံဇီဝနည်းပညာ, Is ကုသ။
နိုင်ငံတကာမှာစျေးကွက်နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောလူနှင့်သတင်းမှားအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အစ္စလာမ်ဘာသာ Siddiqui, အိန္ဒိယတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးလူကြိုက်များသောအဖြစ်လူသိများ "ပိုးသတ်ဆေးရောင်းချတဲ့သူလယ်သမား" သူအခါတိုင်းသင်အခါသမယရှိအဘယ်သို့မိန့်နှင့်အညီ:
"ကျနော်တို့က XXI ရာစုနှစ်တွင်ယခုမလိုအပ်ကဘာလဲဒါဟာသမားရိုးကျထွက်သယ်ဆောင်အခြားတော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဇီဝနည်းပညာ, မွေးမြူရေးနည်းပညာနှင့်မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ၏အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်နည်းပညာများအပါအဝင်ဤရာစုနည်းပညာများကိုအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းပိုးသတ်ဆေး, ယခုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တစ်ဦးသေးငယ်ခြေရာကိုစွန့်ခွာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများနှင့်ဂေဟစနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စိမ်းလန်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစပိုပြီးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းသပ်ပြီးနေကြတယ်။ "
တို့ကိုလှည့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပိုလျှံညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာအတော်များများကအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရက်စွဲကိုရန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ရင်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုကြပြီမဟုတ်ကတည်းကဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျဆန့်ကျင်သော, အန္တရာယ်နည်းပါးကြသည်မေးခွန်းထုတ် Round ထောက်ခံမှုသူတို့ရဲ့ protected စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အစ္စလာမ်ဘာသာ Siddiqui စေသည်။
GM ကကောက်ပဲသီးနှံနှင့် တွဲဖက်. ချထားကမ္ဘာပေါ်မှာဥပမာ, အရှိဆုံးအသုံးများပိုးသတ်ဆေး, Monsantoဒါဟာအခုကဖြစ်နိုင်ခြေသည်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်ကြေညာထားပြီးဖြစ်သောသူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, သေချာစေရန် "အဖြစ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စမ်းသပ်ပြီးခံရ" ဖြစ်ပါတယ် WHO က (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့) ။ ကျနော်တို့သိသာနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား Roundup အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။
ဖြစ်နိုင်အမေရိကန်ဘုရားသုံးဆူအတွက်အကျိုးစီးပွားညှိနှိုင်းရန် Siddiqui ၏အစစ်အမှန် function ကို, ကြီးမားတဲ့အမေရိကန်ဇီဝနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများ, နှင့်သိသိသာသာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှယ်ယာအထောက်အကူပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်ကုမ္ပဏီများ, ပြင်ဆင်ထားသောကောက်ပဲသီးနှံများကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာမျိုးစပါး (မျက်နှာသာဖို့ဖြစ်တယ် OGM), ပိုးသတ်ဆေးနှင့်အတူ '' လေလံ 'ဖို့ Reseller ပေးတဲ့အပေါ်လိုအပ်ပါတယ်ထားတဲ့သီအိုရီအစျေးကွက်စျေးနှုန်းကိုပေးချေကြောင်းသမဂ္ဂများမှ၎င်းတို့၏ကောက်ပဲသီးနှံရောင်းတက်အဆုံးသတ်သူကျိုးနွံလယ်သမားများအတွက်အလွန်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အမြဲပိုမိုမြင့်မားသွားပါလိမ့်မယ်, ရာခိုင်နှုန်း သငျသညျဘဏ်လုပ်ငန်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင့်အကြွေးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိခြင်းထုတ်လုပ်သူခံယူခြင်း, နိမ့်ဆုံးအောက်၌ကောက်ပဲသီးနှံများကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟုအာမခံပေါ်လစီများကိုတိုးမြှင့်မည်မဟုတ်။
"တောင်သူလယ်သမားနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများလည်းတန်ဖိုးရှိရှိပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ Transgene ၏အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသူတို့၏ gelatin sucker နှင့်စားသုံးသူကို အသုံးပြု. ကြီးထွား, ဆင်းရဲမွဲတေပါ။ "
အဘယ်အရာကိုများပါဝင်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည် Siddiqui ဤအစာချုပ်များညှိနှိုင်းသနည်း GM ကအစားအစာတင်သွင်းမှုကိုတှနျးလှနျနိုင် "လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှု" နဲ့စွက်ဖက်ဖို့ပုဂ္ဂလိကတရားရုံးများတွင်တရားစွဲခံရကြောင်းအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမအကျိုးဆက်။
ဒါကသဘောတူညီချက်များအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလမ်းအားဖြင့်မှုခင်းသက်သေအထောက်အထားမှလမ်းပေးရှိရာ၎င်းတို့၏ဒဏ်ငွေပုံနှိပ်အတွက်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိခြိမ်းခြောက်မှုများအကောင်အထည်ဖော်ကမ္ဘာ့မှစတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုကတည်းကအဆိုပါဘုရားသုံးဆူနှင့် TTIP နှင့်အတူမူလတန်းရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် သူတို့ဆုံးရှုံးဘာနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများအကျိုးနှင့်များစွာသောတရားသူကြီးတွေနေဖြင့်အကြံပြုဧကန်အမှန်ရှေ့နေများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့်ဖွင့်ရေးဆွဲ leonine သဘောတူညီချက်များဆန့်ကျင်မယ့်အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်းတရားစီရင်ပိုင်အောင် revalidarlas ရှာသောသူတို့သည်, ထိုတစ်နေ့နေ့မှာ exasperate နိုင် "နှင့်အနောက်တိုင်း" ထာသို့ချဲ့ထွင်နိုင်မသည်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်အဘိုးထိုက်သောတရားစီရင်တော်။
မေလ 2015, အသိအမှတ်ပြုသတင်းစာမှာတော့ အုပ်ထိန်းသူယင်းဆောင်းပါးတွင်မှအောက်ပါကောက်နုတ်ချက်ဖို့သတိပေးထုတ်ပေးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြန်ထုတ်ပေး:
"La အီးယူ သူ TTIP အပေါ်အမေရိကန်ဖိအားကြောင့်ပိုးသတ်ဆေးဆန့်ကျင်ဥပဒေများ, litigating တက်ပေးထားတယျ။ ကုန်သွယ်ရေးအရာရှိတွေကအမေရိကန်တွန်းအားပေး UE မှတ်တိုင်အခမဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အတွက်တိုးတက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ကင်ဆာနှင့်အထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ် endocrine disruptors အဖြစ်ပြုမူကြောင်းဓာတုပစ္စည်းဆန့်ကျင်အားလုံးစက်မှုဇုန်အရေးယူ Cornered ။ "
အများဆုံးလေးနက်ကြောင်းဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်ဤ action နှောင့်ယှက်ဖြစ်ပါသည် စာချုပ်ဟာသူတို့ရဲ့တစ်ရက်နှင့်ပြင်ဆင်ချက်အတွက်အတည်ပြုခဲ့ပြီးတောင်မပါဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းအကျိုးတစ်ခုသဘောတူညီချက်များအတွက်ဖိအားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်, အဲဒါကိုအထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေကြောင်းဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုအတွက်လူဦးရေအပေါ်ရှိစေခြင်းငှါအဆိပ်သက်ရောက်မှုကိုကူးလျက်ရှိသည်။
နိဂုံးချုပ်: ဤသူတို့ hegemonic ဆက်လက်ဆောင်ရွက်၏အမိန့်မှလက်အောက်ဖြစ်ကြောင်းပြသရာသူတို့ကိုယ်စားပြုတောင်းဆိုလူမှခေါင်းဆောင်များနှင့်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပနိုင်ငံရေးသမားတွေရှိသည်လေးစားမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် TTP နှင့် TTIP, အတည်ပြုခံရပြီးနောက်နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အတူ tacit သဘောတူညီချက်မှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုချဲ့ထွင်တဲ့အခါမှာမျှော်လင့်ထားနိုင်တရားစီရင်ပိုင်၏ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။
ဤ "octopusy" ကော်ပိုရေးရှင်း Global ၏မျက်နှာကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက globalist အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ကော်မရှင်, သူဌေးက၏မျက်နှာကိုဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကောင်းတစ်ခုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအထဲကသုတ်နိုင်မည်အကြောင်းအရာက "ကမ္ဘာ၏သခင်" နဲ့အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့လုပ်ရပ်များအတွက်လေးစားမှုကိုပြသထားတယ်, ရှာ၏ရိုးရှင်းသောရည်ရွယ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျလူဦးရေချိန်ခွင်လျှာ, နှေးကွေးခြင်းနှင့်ခေါင်းမာ "ပိုးသတ်ဆေး" ကိုကျေးဇူးတင်စကား (တောင်းပန်ပါတယ်) အဲဒီမှောင်မိုက်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များအတွက်သဘောတူညီခဲ့ .. အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့.
La အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ကော်မရှင် ဒါဟာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတော့ရှယ်ယာအပါအဝင်, အဘယ်သူသည်သကျသခေံအရာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်မည်ကိုကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းအုပ်စုများ၏ pincers ကအုပ်ချုပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာဏာရှင်စနစ်အဖြစ်သန့်စင်ကမ္ဘာကြီးအောင်မြင်ရန် enfuerzan သောသူအပေါင်းတို့အဘို့လက်ဆောင်ကိုနှင့်အနာဂတ်အိပ်မက်ဆိုးတည်ဆောက်နေသည် subliminal အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းလူအပေါင်းတို့၏ပါဝင်အကျိုးစီးပွားအားဖြင့်ငွေကြေးအစားအသောက်ထုတ်ကုန်များအတွက်မလွှဲမရှောင်ဝယ်လိုအားနှင့်အတူစားသုံးသူ။
ယင်း၏ညားနှင့် bombastic အတိုကောက်နှင့်အတူလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများမတည်ရှိပါဘူးနှင့် disrepute, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုများနှင့်အချို့သောအခြားသာဓကသို့ကမ်းနားလမ်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုတက်အဆုံးသတ်သောသူတို့အားအိမ်တအိမ်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ရှာတွေ့လိမ့်မယ်။
20 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 15: 36
11 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 11: 50
16 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 00: 04
သငျသညျသူတို့အာဏာကိုထောက်ပံ့ကြသည် ... .. ကိုထောက်ပံ့ကြသည်ဘယ်အရာကိုမြင်ရန်, မာဒူရိုမဟုတ်သလို Diosdado Cabello ကရေးသားမထား ... .. Emaciated ဖတ်ဒီ MATTRESSES ****, .... အဝိဇ္ဇာစွန့်ခွာရန်, ဖတ်, ပျင်းရိမဖွဘူး ...
16 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 00: 05
... .. သူတို့ကိုဖတ်ပြီးနောက်, သူတို့ကဒီနေဖြင့်၎င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုဆိုလိုသည်ဖော်ပြ .... ... နှုတ်ခွန်းဆက်စကား။
14 ဒီဇင်ဘာလ 2018 0
ဝါဒီဗလီ၏စီးပွားရေးနှင့်အရင်းအမြစ်များကာကွယ်ရေး၏အစနှင့်အတူ Next ကိုအခန်း IV ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာပိတ်သိမ်း - ဤartículoTweetVOXအခန်း III ကိုမျှဝေပါ။ အခွခေံပြန့်ပွားတဲ့သူအီ၏ထုတ်ပယ်ခြင်း, မထီမဲ့မြင် [ ... ]
20 ဒီဇင်ဘာလ 2018 0
ငါမေးခွန်းများကိုတစ်ဦးပူဖောင်းအတွက်အနာဂတ်ကိုမြင်လျှင်မွေးဖွားဒီartículoTweetမျှဝေပါ။ ဆင့်ကဲကျွန်တော်တို့ကိုအံ့သြသို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းစေခြင်းငှါတစ်နည်းပညာဆိုင်ရာအသက်အရွယ်များ၏ကလေးမွေးဖွားမှုအတွက်အစားထိုးချေလျှင်ငါသေးကိုသိ! [ ... ]